ZIKHUPHELELE FACETIME Mac
Posted by FACETIME2019 — December 22, 2019 in umxokozelo Facetime
Face Ixesha le app emangalisayo owadalwa Apple Inc. Le imveliso vidiyo zeefoni wenze aphakame kakhulu kube lula ukuba edibene nabanye ngokwenza ividiyo okanye audio iminxeba. Le app amazing Face Ixesha sidityaniswe zonke izixhobo ekuxhaseni iOS kunye kwiikhompyutha Macintosh kunye Mac OS X 10.6.6 yaye kamva.
facetime for mac ezamahala umxokozelo
download facetime for mac ezamahala
facetime ezamahala umxokozelo for Mac
ezamahala facetime zokulanda mac
Le app elo zenzelwe iPhone 4 abasebenzisi kodwa ngoku ngenxa yokuthandwa kwayo rapid, iba bebubalaselisa eyakhelwe-ngaphakathi kuzo zonke izixhobo Apple kubandakanywa iPhones, iPad, IMac, iPod touch. Unxibelelwano yinxalenye yobomi namhlanje yaye ngoku uyakwazi lula usebenzise Face Ixesha kwi Mac yakho ukuhlala uqhagamshelana ishishini lakho kunye nobomi zobuqu.
In Mac yakho, ufuna nje uqhagamshelo yakho intanethi okanye iinkcukacha zeselula uze ungakwazi lula ukuthetha nabo zakho ngokucofa nje omnye. Le app lokhuphiswano Face Ixesha yenze ukuba kube lula ukuba bathethe nani intsapho okanye abahlobo xa wena ku uhambo, banokuhlala uqhagamshelana nabasebenzi bakho, anganika ntetho, uthethe abaxhasi bakho kwaye uluhlu uyaqhubeka.
It is ultimate, creative, kucace, enobuchule kunye nendlela elula yokwenza ividiyo okanye audio iminxeba kwaye zisala ezinxulumene kunye nabo ehlabathini kwezixhobo Apple. Eli nqaku liza kukunceda ukuba uqonde iimpawu ezisisiseko ukulanda, ngokusebenza kunye namanye amacandelo kwexesha Face for Mac yakho.
1 Download Face Time for Mac OS:
2 Amanyathelo To Install Face Ixesha Ngu Mac Apple ivenkile:
2.1 Iinxalenye ebonakalayo Face Ixesha kwi Mac:
3 Indlela ukuseta FaceTime on Mac:
3.1 Isaziso Face Time & Iimpawu On Mac:
3.2 Useto isaziso ku Face Time:
Download Face Time for Mac OS:
Kuba ngokusebenzisa Face Ixesha kwi Mac yakho, yinto nje konqakrazo lwe ezimbalwa. Face Ixesha le app inbuilt kwi Mac yakho. Zonke iinguqulelo ezidlulileyo Mac sele pre-efakiweyo Face Time.
Konke kufuneka ukwenze ukufaka nje inombolo yakho iPhone kunye Apple email ID kwaye ukonwabela enye yezona ezikumgangatho ophezulu Izixhobo yokuzonwabisa zeefoni kwi Mac yakho. Unga lula ukongeza abafowunelwa zabanye abasebenzisi usebenzisa izixhobo Apple kuquka Mac, iPhones, iPad, iPod, etc. Ungasebenzisa Apple Id yakho email njengoko fown ID lwakho ukuqhagamshelana nabanye abasebenzisi ehlabathini of Apple.
Xa ngaba awunayo i-ukwakha Ubuso ixesha lokusebenza mac lwakho, ungakwazi download ngokulula ngokundwendwela i Mac App Store. Kuba usebenzisa i Mac App Store, kufuneka ube ubuncinane Mac OS X 10.6 okanye ngaphezulu. Ungakhankanya noba ukufumana Mac App Store kwi desktop yakho okanye ukufumana kwi pre-efakwe App Store.
Amanyathelo To Install Face Ixesha Ngu Mac Apple ivenkile:
Fumanisa Face time izicelop ngokubhala ixesha Face kwi bar search of the kwi-yokwakha Mac Apple ivenkile okanye nqakraza ngqo APHA.
Nqakraza kwi Thenga iqhosha ukuze ukwazi ukuthenga Face Ixesha app for Mac yakho.
Faka i-ID yakho Apple okuthenga le software
Indleko ufaka Face Ixesha lokusebenza nje ukuba $0.99
Kubalulekile ukuqonda, ukuba Ixesha Face uya ufake Mac App Store i kuguqulelo oludala. Uguqulelo lwe Face Ixesha entsha ifumaneka Mac OS X 10.6 okanye ngaphezulu. Kuyanconywa ukuba download Face Ixesha kuphela ukuba usebenzisa uguqulelo oludala lwe Mac.
Xa sele efakwe okanye ukufumana software Face Ixesha e Mac yakho, ungenza iividiyo mda okanye iminxeba odiyo kwabanye bonke abantu besebenzisa izixhobo Apple.
Iinxalenye ebonakalayo Face Ixesha kwi Mac:
Kuphakathi kufuneka ube Mac kunye Mac OS okanye une Mac OS X 10.6 okanye ngaphezulu.
Zonke abafowunelwa ofuna ukuyisebenzisa ividiyo okanye audio iminxeba kufuneka Apple I Izixhobo okanye kufuneka usebenzisa Mac.
Okubangel 'umdla kukuba, kwakhona ukunandipha Face Ixesha ezirekhodiweyo Mac yakho abasebenzisi usebenzisa Apple Watch.
Qinisekisa ukuba uqhagamshelwano eyiyo fast intanethi ukuze ukwazi ukunandipha umgangatho ngokupheleleyo vidiyo okanye audio iminxeba ngaphandle iziphazamiso.
Kufuneka wenze ID yakho Apple ukuba uqale usebenzise le app.
Indlela ukuseta FaceTime on Mac:
Kufuneka onke amanyathelo ngasezantsi ukuqala ukudibanisa nge Face Ixesha kunye nabanye abasebenzisi.
Okokuqala, ukuqalisa software yakho Face Ixesha kwi Mac yakho. Ungakwenza oku noba usebenzisa isoftwe pre-efakwe kwi Mac okanye ngokufaka Face Ixesha ukusuka Mac App Store
Faka yakho yamanje Apple ID Ukuba awunaso isazisi sakho, Unga ukudala Nye.
Gcwalisa yokuqinisekisa inkqubo
Uyakwazi uqinisekise iinkcukacha zakho yi nokuba ikhonkco abaqhuba ngayo yakho idilesi yemeyile okanye ungafumana ukuqinisekiswa ikhowudi kwi yakho inombolo yomnxeba.
Emva kokuba inkqubo yokuqinisekisa, kufuneke u ufake iinombolo zefowuni yaye ubunikazi email ngayo abanye abafowunelwa ukuba uqale ngokwenza Face Ixesha umnxeba wakho kuqala.
Le software iya kucela ukukhethayo ukwenza yomsindo nevidiyo umnxeba. Ungakhetha nantoni na ofuna ukuba edibene nabanye abasebenzisi.
Beka ulwazi zabanye abasebenzisi kuquka idilesi ye-imeyile, igama okanye inombolo yefoni. Ungakwenza oko ngokungenisa le ngcaciso kwi-bar search by.
zagcina, ibhokisi ngomnxeba okanye ikhamera ukwenza umnxeba umgangatho kunye app nanto kobuso Time.
Isaziso Face Time & Iimpawu On Mac:
Ukuba ufuna ukuba uqhagamshele kwabanye abasebenzisi Apple okanye ukuba ufumana ifowuni uze wakuba ungakufumani I yakho mfono okanye I Pad, ngoko ungenza ngokukhawuleza usebenzise Mac yakho ukuya umnxeba.
Ngaphezu, ukuba ngaba phakathi umnxeba yakho kwaye ufuna ukutshintsha nasiphi isicwangciso ngoko yisa imouse yakho kwaye nqakraza nayiphi na kwezi ndlela
Unako Thulisa mic okanye ukuthula ngayo
Uyakwazi ukuvula ividiyo on and off kuxhomekeke kukhetho lwakho
Uyakwazi ukukhulisa izikrini zakho ukubukela umfanekiso ocace
Ungagcina umnxeba yakho xa ufuna
Mhlawumbi, ufuna ukutshintsha naluphi na useto lwe Face Ixesha kwi Mac yakho, ungenza lula ukwenza oku ngokuya Apple menu ke yiya kukhetho inkqubo ngoko hamba uye izaziso. A window uya kufumana ivuliwe kufana ngezantsi:
Useto isaziso ku Face Time:
Unga lula Ukuvula okanye ukuvala nantoni oyithandayo. Ungatshintsha isandi izaziso, icons app, Uhlaziyo isaziso nokunye okuninzi
Enye yeembalasane yi, ungenza iqela ubiza ngokusebenzisa iqela ixesha Face audio okanye wevidiyo. Ixhomekeke ku 32 nabo zingasetyenziswa kwiifowuni iqela. Oku kuluncedo kakhulu ukuba abasebenzi, umbutho, kanye brand. Oku kusiza ukuba ukuqhagamshela abasebenzi kunye nabathengi kulo lonke ihlabathi ngokucofa nje omnye.
Eli nqaku apha ezineenkcukacha ulwazi ukuze amise kwaye usebenzise ixesha ubuso mac. Ndiyathemba ke nqaku sele ulwazi kuwe kwaye onalo data luncedo kule piece. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, do share it in the comment box below and share with your friends and family.
Umxokozelo FaceTime for Windows
ZIKHUPHELELE FACETIME FOR PC
Facetime Download - yi downloadfacetime